Kubhururuka drones kunovhima kuitaly beachgoers ayo anoparadzira COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Kubhururuka drones kunovhima kuitaly beachgoers ayo anoparadzira COVID-19
avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kana iyo drone yaona munhu ane fivhiri, inovaziva uye yobva yazivisa timu yekutarisa yezvechiremba, iyo inosvika panzvimbo iyi kuti iongororwe, izvo zvinogona kutungamira kuongororo yeCOVID-19.
Vakuru vezvehutano veRoma kuendesa drones dzinobhururuka mumahombekombe eRoma.
Flying drones kuti utarise kure kutonhora kweve beachgoers muItari.
MaDrones anoshandiswa kuteedzera COVID-19 uye kudzivirira emergency zvehutano.
Vanoona nezvehutano muRome, Italy vari kuendesa drone kuti ibhururuke pamhenderekedzo yeOstia padyo neRome, uye vobva vatarisa tembiricha yeavo vese vanoenda kumahombekombe, kuti vaone vanhu vane hutachiona hweCOVID-19.
Drone ye'kurapa 'yanga yakarongerwa kufamba mumahombekombe eOstia, ruwa rweRome, mukupera kwesvondo, asi kuyedza kwakanonoka nekuda kwekufanoipa kwemamiriro ekunze kweMugovera neSvondo.
Maererano ne Italian vakuru vezvehutano, iyo drone yaizo "ita zvega" kuyera tembiricha ichisimudza ingangoita 25m pamusoro pemvura uye ichigara kanenge 30m kure nevanhu. Ndege dzekuyedza dzakarongerwa kugara kwemaawa mashanu, pakati pa11am na4pm.
"Kana drone ichinge yaona munhu ane fivhiri, inovaziva uye yobva yazivisa timu yekuongorora nezvekurapa," vakadaro vakuru vacho. "Vanachiremba vanobva vasvika panzvimbo iyi kuti vaongororwe, izvo zvinogona kukonzera kuongororwa kweCOVID-19."
Vakuru vakavimbisa kuremekedza zvakavanzika, vachiti vatambi vezororo vane tembiricha yakajairika havazozivikanwa.
Marta Branca, mukuru we ASL Roma 3, chiremera cheveruzhinji chinofukidza matunhu akati wandei eguta reItaly, chakaramba runyerekupe rwekuti chishandiso chinobhururuka chinoshandiswa kutsvaga vanhu vanoparadzira chirwere.
"Iyi ingori nzira yekuona kuti chirwere kana tsaona pamhenderekedzo yegungwa kana mugungwa zvakaonekwa nekukurumidza uye hapana kana nguva imwe yakarasika mukuyamura," akadaro Branca. “Baba vangu vakanga vafa saizvozvo. Pamwe nedhironi iri angadai achiri pano. ”
Panguva imwecheteyo, Branca akabvuma kumisidzana mukutaurirana nezve chiitiko ichi, achivimbisa kudzivirira kusawirirana mune ramangwana.